Cunnooyinka qudaarta Cunto miro Caano iyo Suugo Cuntada Caribbean
Recaito waa basbaas cagaaran oo cagaar ah, caleentro (recao) caleemo, toon, basbaaska cagaaran iyo xajmiga dhadhanka (basbaaska yar-yar ee qabow).
In Puerto Rico, recaito waxaa loo isticmaalaa sida xawaashka saldhiga loo yaqaanno sofrito. Markaad diyaarinaysid cunnooyinka Puerto Rican, waxaa laga yaabaa inaad u aragto inay ku magacowday magac.
Fiiri maqnaanshaha tamaandhada. Caadi ahaan, Puerto Ricans ma ku daraan yaanyada si ay u soo celiyaan. Cunto sardiyood ah oo ay ku jiraan yaanyo ama yaanyo yaanyo ah, maraqa ama casiirka guud ahaan waa Dominican, Cuban, Isbaanish, Talyaani, iyo Cunnooyin kale oo Mediterranean ah. Waxaad ka akhriyi kartaa wax badan oo ku saabsan sababta ay tani u tahay maqaalkayga " Waa maxay Sofrito? ".
2 Muraayad cagaaran oo dhexdhexaad ah ama basbaaska Cubanelle, abuurka ayaa laga saaray
2 basal dhexdhexaad ah, diiray
1 madax oo toon ah, diiray
6 xayiraad xayawaan ah (basbaaska yar yar ee qashinka ah)
1. Iska ilaali oo walxo dhammaan walxaha ku jira makiinadda cuntada ama sheyga.
Notes ee Cook:
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Cubanelle Peppers waxaa sidoo kale loo yaqaannaa basbaaska saliida ee Talyaaniga. Ka saaridda miraha ka soo jeeda dulmanaha waa xulasho.
Sida loo Isticmaalayo: Recaito waxaa sida caadiga ah loo isticmaalaa saldhigga bilowga ah ee maraqa, maraqa, digirta iyo bariiska. Waxaa marka hore la qoraa saliidda ama shiidaalka, kadibna maaddooyinka kale ee la karinayo ayaa lagu daraa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira cuntooyin kale halkaasoo dib loo soo celin karo dhamaadka wakhtiga karinta si uu ugu daro taabasho dhammaystiran ee cuntada.
Sida loo keydiyo: Sababtoo ah maaddadaas muhiimka ah, maaha wax aan caadi aheyn kariska guriga si uu u diyaariyo kooxo ballaaran oo dib loo furo / sofrito ah si loo helo wax ku filan gacanta oo la isticmaalo wiigga oo dhan iyo in la isticmaalo waqti yar isticmaalka dambe. Ku keydso dib udiyaarin / sofrito cusub oo ku jira weelka dhalada ee qaboojiyaha si loogu isticmaalo si dhakhso ah ama ufadhiso 1/4 illaa 1/2 koobi oo loo isticmaalo waqti kasta.
Jawaabta Tilmaame-siinta Qiimayaasha Isticmaalaha
Si aad uga baxdo dib u eegis cadaalad ah oo sax ah, fadlan sameyso iskudhafka kahor intaadan dhajin. Waxaa jira kala duwanaansho badan oo kala duwan oo dunida oo dhan ah. Haddii aad rabto in aad sameysid nooc ka duwan kan sofrito fadlan fiiri liistada cunto kariska . Haddii aad rabto inaad wax dheeraad ah ka ogaatid taariikhda sofrito iyo sida ay u timid Caribbean, fadlan akhri maqaalkayga qotoda dheer ee fadhiga . - Hector Rodriguez, Tilmaamahaaga Cuntada Caribbean ee Latin
Fatuurad la ruxay 0 g
Kolestarool 0 mg
Fiber diirran 2 g
Macmacaanka Foornada-Qalinka ah
Coconut Coconut Macaroons
Hilibka sonkorta leh ee la kariyey ee la kariyey ee la kariyey
Macmacaanka macaan iyo Spike Veggie ee Grill
Beetroot, Pumpkin Seed, iyo Cheddar Brunch Rooti
Honey Mustard Chicken Nours
Classic Classic Coq au Vin Recipe
Soo bandhiga: VeganEgg
Sidee loo sameeyaa Cream
Tijaabooyinka Cuntada Mareykanka
Rice Meatloaf Wild Wild
35 Cunnooyinka loogu talagalay Cuntada Dhaqanka ee Noorwiijiga
Kiimikada Bariiska Lagu Qiimeeyay
Kalluunka iyo Waffles
Cunto-qabka Shiidaalka Guinness
Atole (Recipe Basic oo leh Masa Harina)
Cabitaanka aan khamriga ahayn
'Salad baradho' salad? Waa hagaag, Kinda Sorta
Cabitaanka Cirifka Nadiifka ah ee Apple
Shiine-Style Qeybaha Giriigga ah